နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး NLD ကြိုးပမ်း | Ko Oo + Ma Thandar
« ဒုက္ခသည်တွေ လုံခြုံမှုကင်းတဲ့အတွက် နေရပ်ရင်းကို မပြန်လို
လွှတ်တော်သစ်အတွက် နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ပြင်ဆင် »
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး NLD ကြိုးပမ်း
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) က ပြုလုပ်မယ့် လွတ်လပ်ရေးနေ့အကြို ဈေးရောင်းပွဲက ရတဲ့ ရန်ပုံငွေတွေကို နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လိုအပ်နေတဲ့ ဆေးဝါးနဲ့ အ၀တ်အထည်တွေအပြင် သူတို့မိသားစုတွေကိုလည်း ထောက်ပံ့ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့ NLD ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးအုန်းကြိုင်က ပြောပါတယ်။
အခုရက်ပိုင်းအတွင်း မြန်မာပြည် အထက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာ အအေးလှိုင်း ဖြတ်မယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေက ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ထားတာကြောင့်လည်း အဲဒီဒေသမှာ ရှိနေကြတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ပိုပြီး စိုးရိမ်လာနေကြတာပါ။ အပြည့်အစုံကို ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
NLD အနေနဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့အကြို ဇန်န၀ါရီလ ၂ ရက်နဲ့ ၃ ရက်နေ့တွေမှာ ရန်ကုန် ရွှေဂုံတိုင်မှာရှိတဲ့ ရုံးချုပ်ရှေ့မှာ ဈေးရောင်းပွဲ ကျင်းပပြီး ရတဲ့ ရန်ပုံငွေတွေနဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လိုအပ်နေတဲ့ ဆေးဝါးနဲ့ စောင်တွေအပြင် သူတို့မိသားစုဝင်တွေကို ထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်း ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးအုန်းကြိုင်က ပြောပါတယ်။
“ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အဲဒီက ရလာတဲ့ အမြတ်အစွန်းတွေ အားလုံးကို နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား မိသားစုတွေကိုရော၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကိုရော လိုအပ်တဲ့ ဆေးဝါးတို့ ဘာတို့ ကူညီဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်မှာ ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ ရောင်းမယ့် ပစ္စည်းတွေကတော့ အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လက်ဆောင်ပေးလို့ရတဲ့ Souvenir ပစ္စည်းတွေလေ။ နောက် အ၀တ်အထည်တချို့ ပါမယ်။ အဲဒီ အ၀တ်အထည်တွေကလည်း တကယ့်ကို မှတ်မှတ်သားသား သိမ်းထားလို့ ရလောက်တဲ့ အ၀တ်အထည်တွေ ဖြစ်မယ်။
“နောက်တခုကလည်း တချို့မြို့နယ်တွေက လာပြီးတော့ အစားအသောက်တွေလုပ်ပြီး ရောင်းချဖို့ အစီအစဉ်တွေ ရှိတယ်။ နည်းနည်း စည်စည်ကားကားလေး ဖြစ်အောင်ပေါ့။ အဲတော့ ၂ ရက်နဲ့ ၃ ရက်နေ့မှာ မနက် ၈ နာရီလောက်က စဖွင့်ပြီးတော့ ညနေအထိ တောက်လျှောက် ဈေးရောင်းပွဲတော် လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။”
NLD ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးအုန်းကြိုင် ပြောပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်မှာ ၄၄ နှစ်အတွင်း အအေးဆုံး အခြေအနေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့ မိုးလေ၀သနဲ့ ဇလဗေဒ ဌာနကလည်း တရားဝင် ထုတ်ပြန်ထားတာကြောင့် ဆေးဝါးနဲ့ အ၀တ်အထည် လုံလုံလောက်လောက် မရကြတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေတွေကို မိသားစုဝင်တွေက ဒီရက်ထဲမှာ ပိုပြီး စိုးရိမ်လာနေကြတာပါ။
မြစ်ကြီးနားထောင်မှာ ရောက်နေတဲ့ ကိုသူရ ခေါ် ကိုဇာဂနာဟာလည်း အခုရက်ပိုင်းအတွင်း သူ့ရဲ့ နဂိုရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ ကျီးပေါင်းတက်တာနဲ့ သွေးတိုးရောဂါတွေကို ပြန်ခံစားနေရတာကြောင့် သူတို့အနေနဲ့ ကိုဇာဂနာရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို စိုးရိမ်မိတဲ့အကြောင်း ခယ်မတော်သူ မငြိမ်းက ပြောပြပါတယ်။
“ကျမ အဲဒီကလွတ်လာတဲ့ ဘုန်းကြီး ဦးစန္ဒိမာကို သွားတွေ့တယ်။ တွေ့တော့ နေလို့ကောင်းရဲ့လားလို့၊ ကျမလည်း ထောင်ဝင်စာ အပိတ်ခံရတာ ၇ လရှိပြီပေါ့။ အဲလိုဆိုတော့ သူက သူသိသလောက် ပြန်ပြောတာတော့ အကိုက သူနဲ့တော့ တိုက်မတူဘူး၊ ကျီးပေါင်း ပြန်ထနေတယ် ကြားတယ်တဲ့။ ကျီးပေါင်းရောဂါ၊ ပြီးတော့ သွေးတိုးနည်းနည်း ပြန်ပြီးဖြစ်နေတယ်လို့ ကြားတယ်လို့ ပြောတယ်။ အခု သူလွတ်လာတာ ၁၀ ရက်လောက်တော့ ရှိပြီနဲ့တူတယ်။
“ကျမ အဲဒီလိုတော့ ကြားတယ်၊ နေတော့ သိပ်မကောင်းဘူးဆိုပြီး ရာသီဥတု အေးတဲ့အပေါ်လည်း ကျမတော့ နည်းနည်း စိုးရိမ်မိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မြစ်ကြီးနားက ကျမ ထောင်ဝင်စာ စတွေ့တဲ့ ၂၀၀၈ ကတည်းက တော်တော်အေးတာကို ကျမ ကြုံခဲ့ဖူးတယ်။ ကျမတို့ ရန်ကုန်ကဆိုတော့ မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ အခု ဒီနှစ် ဖုန်းလှမ်းဆက်ပြီး အသိတွေ မေးကြည့်တော့လည်း တော်တော့်ကို အေးတယ်တဲ့။ လေတိုက်တိုင်းကို စိမ့်နေတာပဲတဲ့။ မနှစ်ကနဲ့ မတူဘူးပေါ့။ အဲလိုဆိုတော့ အဲဒီအနေအထားပေါ်မှာတော့ ကျမလည်း စိုးရိမ်ပါတယ်။”
အခုလို ရာသီဥတု ဆိုးရွားတဲ့ အချိန်မှာ ကျီးပေါင်းရောဂါဟာ ပိုဆိုးလေ့ ရှိတယ်လို့ မငြိမ်းက ဆက်ပြောပြပါတယ်။
“ကျီးပေါင်းရဲ့ သဘောကတော့ ရာသီဥတုအေးတော့ အကြောအချဉ်တွေ တက်တယ်။ အဲဒီအနေအထားမှာ ဆိုရင် ပိုဆိုးတယ်ပေါ့။ နည်းနည်း ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား Exercise လေးဘာလေး လုပ်ရင်တော့လည်း နည်းနည်း သက်သာသွားတာပေါ့။ ကိုယ်လည်း ခံစားနေရတော့ သိတာ။ အဲဒီအပေါ်မှာတော့ ကိုသူရလည်း သူ့ဟာသူတော့ နည်းနည်း အဆင်ပြေအောင်တော့ ရပ်တည်ရမယ်နဲ့ တူပါတယ်။ ကျမလည်း ဒီလိုပဲ ဆုတောင်းရုံမှတပါး ဘာမှလုပ်လို့လည်း မရကြဘူး။”
ဇနီး၊ သားသမီးသာ တွေ့ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက်နဲ့ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ထောင်စည်းကမ်းချက်ကြောင့် ခယ်မတော်သူ သူ့အနေနဲ့ ကိုဇာဂနာကို ထောင်ဝင်စာ မတွေ့ရတာ ၇ လရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတခု ဖြစ်တာကြောင့် ဒီကိစ္စကို ဥပဒေရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေထံ စာရေးတိုင်ကြားဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်း မငြိမ်းက ဆက်ပြောပါတယ်။
“ကျမအနေနဲ့ မြင်တာလည်း သူတို့အနေနဲ့ ချထားတဲ့ ထောင်စည်းကမ်းကို ကျမတို့လည်း အကုန်လုံး၊ ကျမလည်း မိသားစုဝင်၊ သန်းကောင်စာရင်းထဲမှာလည်း မိသားစုဝင် ဖြစ်လျက်နဲ့ ဇနီး၊ သားသမီးနဲ့ တွေ့ခွင့်ပြုသည်ဆိုတဲ့ အမိန့်ကြီးကတော့ သိပ်ပြီး လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်လွန်းတယ်လေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူ့အမျိုးသမီး၊ သူ့သားသမီးက၊ ကလေးတွေ ကျောင်းတက်လို့ မလတ် လိုက်သွားမှန်းလည်း သိသိကြီးနဲ့ ဒီ ဇနီး၊ သားသမီးနဲ့ တွေ့ခွင့်ပြုသည် ဆိုတဲ့ အမိန့်ကြီးကတော့ သိပ်ရုပ်ဆိုးလွန်းတယ်ပေါ့။ အဲဒီအပေါ်မှာတော့ ကျမတို့ စာထပ်တင်သွားမယ်။”
ကိုဇာဂနာရဲ့ ခယ်မတော်သူ မငြိမ်း ပြောပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုနှစ် ဆောင်းရာသီမှာ အအေးပိုတဲ့အတွက် ရှမ်းပြည်နယ် ကျိုင်းတုံထောင်မှာ ထောင်ဒဏ် ၆၅ နှစ် ချမှတ်ခံထားရတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေဟာလည်း ပိုဆိုးနေတယ်လို့ AAPP နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အသင်းက တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ကိုဘိုကြည်က ပြောပြပါတယ်။
“အအေးလှိုင်းဖြတ်တော့ ရာသီဥတုက ပိုအေးနေတယ်။ ပိုအေးနေတော့ အထဲမှာ ရှိတဲ့သူတွေ၊ ဥပမာ ကိုမင်းကိုနိုင်ဆိုရင် အေးလွန်းအားကြီးလို့ ခြေလက်တွေတောင် တုံ့ဆိုင်းသလို ဖြစ်တယ်လို့ ကြားနေရတာ ရှိပါတယ်။”
ကိုဘိုကြည် ပြောပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တခြား နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေဟာလည်း လူ့အခွင့်အရေး အမျိုးမျိုးကို ချိုးဖောက်ခံနေကြရတာကြောင့် အဲဒီ ချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ သိရှိလာအောင် အကျဉ်းထောင် လက်စွဲစာအုပ် ထုတ်ဝေနိုင်ဖို့ NLD ဘက်က စီစဉ်နေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အပြင်မှာ ရှိနေကြတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား မိသားစုဝင်တွေရဲ့ ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေမှာ တတ်နိုင်သလောက် ၀ိုင်းဝန်း ကူညီပေးကြဖို့လည်း ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့က ပြုလုပ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
This entry was posted on December 29, 2010 at 3:33 pm and is filed under အဖွဲ့ချုပ် နှင့် ပြည်တွင်း အတိုက်အခံများ, ဖြန့်ဝေခြင်း, နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ, News.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.